MUSHARAX JAMAAL AFAR XAARAAMOOD AYUU XALAASHADAY-2 | Maalmahanews
MUSHARAX JAMAAL AFAR XAARAAMOOD AYUU XALAASHADAY-2
March 16, 2016 - Written by admin
Kolkuu UDUB ta takhulisay si gas gaabnimo ah oo ay xisbigii Qaran ku baaba’ay iskaashi qabiil iyo nin sida gumeysi dal ku soo duulay ay kaga dhegtay waxaan u imid inaan idin xukumo. Ma qaadin dariiq sax ah oo uu ku furto Urur, waayo ma laha kalsoonidaa. Dariiqa xalaasha ahna uma qoolna. Waa nin ay kaga dhegentay dariiq xaraan ah iyo sharci jabin.
Kolkana waxuu arkay UCID oo garab ka yaacay iyo Faysal oo la daalaa dhacaaya. Waxuu yidhi kana bal baayac. Faysal oo u baahnaa taageero meel uun ka timaada, ayaa u degey shax la yidhaahdo Murashaxa Madaxweynha. Hadda waxa taagani ,a aha doorasho Madaxweyne ee waa tii deegaanka. Waligeen mey dhicin dunida nin afar sano iyo dheeraad sita title ah Murashaxa Madaxweynaha. Waxuu ku labay Magaciisa sida uu uGu labay Aqoonyahan oon cidi isaga ma aha dunida sheegan. Waa caqli gab u dhimanaaya ammaan aan macno lahayn. Nin aan lahayn ku dhac oo aamina inta la cashaysa iyo inta isla sawirta.
Waxa uu qaatay dariiq kale oo qaldan. Waxa laga iibiyey waxaan jirin. Sharciga muu akhrisan inaan maamulka xisbiga wax awood ku lahayn magacan uu jecel yahay ee Murashaxo, ayna tahay inuu soo baxo sanadka uGu dambeeya ee doorashooyinka. WAxa uu maalin walba ku qabsadaa Faysal maamulka xisbiga kolkaas ayuu candhuuftiisa dib u liqaa, illeyn melena maamulka xisbiga kagama jirto Murashaxa Madaxweyne.
Aqoonyahanka uu sheegtay waa maxay tolow. Ninka isaga oon akhrisan sharciga xisbiyada heshiis la galaaya qof keliya. Waxuu cadaystay inuu kol walba jabiyo sharciga dalka. Tan iyo tii uu UDUB ku sameeyey haddayna Soomaliland ahayn la jiifiyaa banana manta xabsiga mandheera ayuu jiifi lahaa. Waxa ayaan darro inta aamin san inuu musuq la dagaalami..waaba musuq iyo nin aan u libiqsan sharci jebinta. Inta wanaag ka sugaysaa waa dar aragti gaaban.
LA SOCO XAARANTA SEDDEXAAD OO KA CULUS LABADA HORE.